Home Wararka Madaxweyne Ahmed madoobe ayaa kusii jeeda boosaaso
Madaxweyne Ahmed madoobe ayaa kusii jeeda boosaaso
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhow ka ambabaxay magaalada Kismaayo, iyaga oo ku sii jeeda magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.
Safarka Axmed Madoobe ee Puntland ayaa ah kii u horreeyay, tan iyo markii bishii Agosto ee sanadkii hore dib loo doortay, waxaana la sheegay in safarkiisa Boosaaso uu qaadan doono saddex cisho.
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Boosaaso ayaa la filayaa inuu soo dhoweeyo Wafdiga Madaxweyne Axmed Madoobe.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in magaalada Boosaaso uu ka furmi doono shir wadatashi ah oo u dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland, waxaa shirka looga hadli doonaa xaalada siyaasadeed ee dalka, iyadoo sanadkan 2020 uu dalka galayo xilli kala guur ah oo doorashooyin la galayo.
Shirka wadatashiga ayaa la filayaa in laga soo saaro war murtiyeed ku saabsan xaalada siyaasadeed ee dalka, iyadoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in laga yaabo in Puntland ku dhawaaqdo marti gelinta shir ballaaran oo ay ka soo qeyb galaan saamileyda siyaasadeed ee dalka.
Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo Isbaheysi ah ayaa xilligan ah labada maamul ee si weyn uga soo horjeeda dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkeeda uga harsan yahay sanad.